Itekhnoloji yeTiger ibonisa ukugcinwa ngokubambisana kunye nokuhamba komsebenzi kwi-IBC 2019 -I-NAB bonisa iiNdaba ngoSasazo lweBeat, Umsasazi waseburhulumenteni weNAB Show-NAB BONISA uXOLO
ikhaya » iindaba » I-Tiger Technology ibonisa ukugcinwa ngokubambisana kunye nokuhamba komsebenzi kwi-IBC 2019
I-Tiger Technology ibonisa ukugcinwa ngokubambisana kunye nokuhamba komsebenzi kwi-IBC 2019
Imiboniso ebonakalayo ye-AWS nokudityaniswa nabaphuhlisi beqela lesithathu baya kwenza eyona nto iphambili yokuma kweTiger Technology kuluntu kulo nyaka
I-GA, e-USA, i-11 ngo-Septemba 2019 - Itekhnoloji yeTigerUmkhokeli kugcino lwamafu kunye nolawulo lwedatha kusasazo nakwimakethi yemveliso yasemva kwemveliso, uya kusebenzisa i-IBC yalo nyaka ukubonisa iimveliso zayo ezinikezela iinkonzo zewebhu ye-Amazon (AWS). Ezi nkqubo zenzelwe ukunceda abathengi bashenxise umxholo wokugcina kwilifa ukusuka kwiinkqubo ezindala zetheyiphu ukuya kwiindlela zelifu okanye ze-hybrid, ngenjongo yokuthoba iindleko kunye nokufikelela ngokufikelelekayo. Iinkqubo zeTiger zidityaniswa nezisombululo ze-Media-t-to-Cloud zokuphatha ukufuduka, kunye neSpectra Logic kunye ne-Qualstar yokugcina kunye neenkqubo zokugcina. Kuya kubakho ukuboniswa kokuhamba kweTiger Technology kunye nezixhobo zokulawulwa kwedatha ezihlanganiswe kulondolozo lwefu le-ERA kunye neenkqubo zokudala umxholo.
Inethiwekhi yeqabane leTiger ngoku libandakanya uNexsan, inkampani yeStorCentric. I-Nexsan kunye ne-Tiger batyikitye isivumelwano somthengisi wehlabathi lonke, phantsi kwayo uNexsan uya kubonelela ngeTiger Technology Collaborative Umxholo wokuDala kunye ne-Media Management yeenkqubo zokugcina i-Nexsan. Umdibaniso wesixhobo se-Nexsan kunye nesoftware ye-Tiger ibonelela ngeqonga elipheleleyo, elisebenza ngokuphezulu, ngoku elikhoyo kusetyenziswa inethiwekhi ye-Nexsan yokuthengisa.
Iindwendwe eziza kuma kwi-7.B58 kwi-IBC ziya kukwazi ukubona imiboniso ebonakalayo yendlela iTiger Technology ehambisa ngayo amandla e-AWS. Indawo yokuma kweTiger iya kuqhagamshelwa kwindawo ye-AWS e-Hall 5, eya kubonisa ukuhanjiswa kwesiqulatho kunye nokusetyenziswa kwelifu phakathi kwezinye iinkonzo. Iifayile ziya kubuyiselwa kwikhompyuter kusetyenziswa itekhnoloji ye-Media Translation Inc kwaye ifakwe kwi-overcast ye-HQ yemithombo yemithombo yeendaba yolawulo lweempahla, nayo yonke into edityanisiweyo ngeTiger Bridge.
I-Tiger Bridge yenza ukugcinwa kokuhamba kwamafu okuphambili. Inguqulelo yamva yenza ukuba ukubuyisa idatha kukhawuleze kunangaphambi kokubulela inqaku elitsha lokubuyisela. Oku kwenza ukuba abasebenzisi bafumane ixesha kwaye bagcine kwindawo yokugcina ngokubuyisela kuphela ubuncinci beedatha ezifunekayo. ITekhnoloji yeTiger iye yazakhela udumo ekuyileni isoftware kunye nokusebenza okuphezulu, iinkqubo ezikhuselekileyo zolawulo lwedatha kwi-IT yeshishini, ukujonga, imithombo yeendaba kunye neemarike zokuzonwabisa. Kule minyaka i-15 idlulileyo iimveliso zayo ziye zaqwalaselwa ngabasebenzisi abakhokelayo kunye nabathengisi kula macandelo njengethembekile, esebenzayo kwaye engabizi mali.
Itekhnoloji yeTiger iya kubonakalisa iSitolo seTiger sokulawula ukuSebenza okwenziwa ngabasebenzisi abaninzi; Indawo yeTiger, yenzelwe ulawulo lweprojekthi yabasebenzisi abaninzi kwaye Avid ukutshixa imigqomo; kunye nomphathi ogciniweyo wokugcina, iTiger Pool.
Phakathi kwamaziko aphezulu asebenzisa iTiger Technology yiVENKILE yoPhumo lwe-ENVY. "Besisoloko sisebenzisa iimveliso zeTiger ngaphezulu kweminyaka esibhozo," utsho umphathi wezobugcisa kwi-ENVY UK uJai Cave. "I-ENVY isebenza ngokunyanzelisa, ihlala ijika ngokukhawuleza imveliso kwaye iinkqubo zeTiger zibonelela, sinokuthenjwa kunye nenkxaso esiyifunayo."
I-Tiger Bridge iya kuboniswa idityanisiwe kunye nokugcinwa kwefu lika-Coeus ukusuka kwi-UKRA yokuhamba komsebenzi kwi-ERA, esebenza nge-Tiger Bridge kwifom yayo yemveli, kunye nezixhobo zokudala umxholo weTiger. Yimani yodwa okanye idityanisiwe, iTiger Bridge inika abasebenzisi amandla okuba nedatha efanelekileyo kwindawo efanelekileyo yeendleko ezifanelekileyo.
Zonke ezi mveliso kunye nemiboniso inokubonwa kwindawo yokuma kweTiger Technology, 7.B58, kwi-IBC kwi-Amsterdam RAI ukusuka kwi-13 ukuya kwi-17 kaSeptemba.
Malunga neTiger Technology
I-Tiger Technology ibisenza isoftware kwaye iyila ukusebenza okuphezulu, kukhuselekile, isisombululo solawulo lweedatha kwiinkampani kwi-IT Enterprise IT, uPhononongo, iMidiya kunye noLonwabo, kunye neemakethi ze-SMB / SME ukusukela kwi2004. Ichongwe yi-Endeavor njengomnye wababoneleli bezobuchwephesha bokuphambili kwimarike namhlanje.
Abathengi basebenzisa izisombululo ze-Tiger kumazwe angaphezu kwe-120. Iphothifoliyo yesoftware yeTiger iquka isantya sokwabelana ngeefayile zeNAS / SAN, isiseko sevolthi kunye nolawulo lweprojekthi yendawo yokusebenza ukongeza kwi-HSM tiering kunye nezisombululo zonxibelelaniso. ITekhnoloji yeTiger yenza ukuba imibutho yayo nayiphi na ubungakanani kunye nobukhulu ilawulwe ngokuphathwa kwee-asethi zawo zedijithali kwindawo yangaphambi kwesakhiwo, ilifu loluntu, okanye imodeli ye-hybrid.
Inkampani ibanjwe ngasese kwaye izibonelelo ezivela kwitalente engaphezulu kwe-40 yobunjineli obunamava kwishishini kunye nabaqeqeshi bendawo. Ithathwa kwikomkhulu eSofia, eBulgaria naseAlpharetta, GA, USA.
Ngolwazi olungakumbi nceda uvakatye: www.tiger-technology.com/
Mayelana nee-Amazon Web Services
Kwiminyaka ye-13, iiNkonzo zeWebhusayithi zeAmazon iyeyona iqonga liphezulu nelibanzi elamkelwe ngokubanzi. I-AWS ibonelela nge-165 eboniswe ngokupheleleyo iinkonzo zekhompyuter, ukugcinwa, ugcino lwedatha, uthungelwano, iirobhothi, ukufundwa komatshini kunye nobukrelekrele bokwenza izinto (AI), i-Intanethi yezinto (IoT), iselula, ukhuseleko, i-hybrid, ukubonwa okwenyani kunye nokwengeziweyo (VR kunye ne-AR ), imidiya, kunye nophuhliso lokusetyenziswa, ukuthunyelwa, kunye nolawulo oluvela kwiMimandla yokuFumaneka kwe-69 (AZs) kwimimandla ye-22 yendawo, ithathe indawo ye-US, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, Hong Kong Regional Administrative Region, India, Ireland, Japan, Korea, Middle East, Singapore, Sweden, nase UK. Izigidi zabathengi-kubandakanya ukuqala okukhawulezayo okukhula ngokukhawuleza, amashishini amakhulu, kunye neearhente zikarhulumente-bayathemba i-AWS ekuboneleleni ngezixhobo zayo, babe badala ngakumbi, kunye neendleko eziphantsi.
Ngolwazi olungakumbi nceda uvakatye: aws.amazon.com/
I-Nexsan® yinkokeli yokugcina ugcino lwamashishini ehlabathi, eyenza abathengi bakwazi ukugcina ngokukhuselekileyo, ukukhusela nokulawula idatha ebalulekileyo yeshishini. Umiselwe kwi1999, uNexsan uzakhele igama elinexabiso lokugcina ngokuthembekileyo nelingabizi mali kugcino ngelixa asele ekhulile ezisa ugcino olwakhelwe injongo. Itekhnoloji yayo eyingqayizivele kunye nelungelo elilodwa lomenzi wechiza evelayo, iimfuno zeshishini ezintsonkothileyo nge-portfolio egcweleyo yogcino enobunye, ukugcinwa kwebhloko, kunye nokugcina indawo yokugcina ulwazi. I-Nexsan iguqula ishishini lokugcina ngokuguqula idatha ibe yingenelo yeshishini ngokhuseleko olungalinganiyo kunye nemigangatho yokuthobela. Ilungele iimeko ezahlukeneyo zokusetyenziswa kubandakanya urhulumente, ezempilo, imfundo, iiSayensi zoBomi, iMidiya kunye noLonwabo, kunye namaZiko okuFowuna. I-Nexsan yinxalenye yosapho lwe-StorCentric yeemveliso kwaye lusebenza njengesahluko esahlukileyo ukukhusela ulwazi ngeshishini ngokukhuselekileyo.
Ngolwazi olungakumbi nceda uvakatye: www.nexsan.com/
Qha ga mshelwano:
Inombolo: + 44 (0) 7990 594555
Ngokuhlanganisana namava aneminyaka eyi-40 esebenzayo kwiNtlalontle yoLuntu, I-Melia PR ayiyona enye inkonzo ye-PR.
Apha, iqela lethu elizinikezele, elifundisayo nelinomdla lifana nokujonga izinto ngeendlela ezahlukeneyo ukuze kuqinisekiswe ukuba amazwi ethu maklayenti avakala. Siyaqulunqa indlela umyalezo wakho wabelwe ngayo.
Ngendlela yokuThengiswa kokuQinisekisa kunye ne-PR esilungele ukuthetha 'okungenalutho' sithethe 'kwaye sichaze ngqo entliziyweni yemiba, sigxininise ekuvuseleleni izihloko zenkcubeko, izifundo kunye nezikhundla zeblogi.
Asikusebenzisanga kuphela kunye nabaphathi, abachaphazeli kunye nabenzi izigqibo ukugxininisa imiba esichaphazelayo nokuguqula i-shishini lethu, sinobudlelwane obuqinileyo neengxelo zeendaba, abahleli kunye neempapasho zokudala abaxhasi bequlatho bafuna ukuxoxa-kwaye abafundi bafuna ukufunda.
Izithuba ezandwendwe ngePelia Melia PR (ndinibone nonke)
Amahlakani e-V-Nova kunye ne-Simplender entsha ye-Pan-Afrika yokuSasazwa kweNkonzo yeMVMO - Septemba 11, 2019
I-Tiger Technology ibonisa ukugcinwa ngokubambisana kunye nokuhamba komsebenzi kwi-IBC 2019 - Septemba 11, 2019
Imithombo emithathu yoSasazo i-XEN: Ipayipi ngexesha le-IBC 2019 - Septemba 2, 2019
Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli Isitoreji Samafu Ukugcina ngokuSebenza Lawulo lwe data YENZA Imveliso yePosi ye-ERA ibc 2019 ukudityaniswa Ulawulo lweMidiya Ukuguqulelwa kweMedia Inc I-Nexsan Ubuninzi be-HQ mveliso I-Tiger BridgeAWS Ivenkile ye tiger Itekhnoloji yeTiger Injini yeVidiyo ndiphila Workflows	2019-09-11
Previous: I-Audiovisual Production Specialist
next: Amandla ePixel ongezelela isoftware echaziweyo engaxhaswanga kwi-IP ukuseka i-PlayMaster edibeneyo yokuDlala